फूलमा मौसम र मलमासको असर : तिहारअघि नै फुलेका फूल कसरी जोगाउने ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
फूलमा मौसम र मलमासको असर : तिहारअघि नै फुलेका फूल कसरी जोगाउने ?
कात्तिक १७, २०७७ सोमबार ७:३१:४६ | मदन पौड्याल
काठमाण्डाै - मलमासका कारण यसवर्ष दशैँ तिहार जस्ता मुख्य चाडपर्व झण्डै एक महिना पर धकेलिए ।
दशैँ सकिएको छ । तिहार र छठ सुरु हुन केही दिन अझै बाँकी छ । तर तिहारका लागि आवश्यक पर्ने सयपत्री फूल भने ढकमक्क फुलिसकेका छन् । तिहार अगाडि नै फूल फुलेपछि माग र आपूर्ति प्रभावित हुने देखिएको छ । कोरोना महामारीको मारमा परेका पुष्प व्यवसायी तिहार अगाडि नै फूल फुलेपछि थप चिन्तामा छन् ।
तर कतिपय फूल खेतीमा लागेका किसानले तिहार कहिले परेको छ यकिन नै नगरि आफ्नै तरिकाले रोपेको भए त्यो फूल तिहार र छठसम्म रहन सक्ने अवस्था छैन । फूललाई टिपेर राख्नै समस्या छ । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ, ‘फूल टिपेर राख्न सम्भव हुनेहरुले कोल्डस्टोरमा राखेमा १०/१५ दिन आयू बढ्न सक्छ ।’
पुष्प व्यवसायीलाई पलायन हुन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र आफूहरु पनि इ-कमर्सको माध्यमबाट घर दैलोमा सेवा पुर्याउने गरी तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘दशैँले गर्दा केही ढिलासुस्ती भयो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘इ-कमर्सको माध्यमबाट उपभोक्ताको घर दैलोमा सेवा पुर्याउन खोजिरहेका छौँ । यसले गर्दा थला परेको व्यवसायबाट किसानलाई माथि उठ्न थोरै भए पनि राहत पक्कै पुग्नेछ ।’
गएकाे वर्ष तिहारमा सयपत्री २० लाख र मखमली ५ लाख गरी २५ लाख माला खपत भएको थियो । तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री, मखमली र गोदावरीमध्ये सयपत्री मात्रै भारतबाट ल्याउने गरिएको थियो । गएको वर्ष तीन लाख सयपत्रीका माला भारतबाट ल्याइएको थियो । तर यसवर्ष भने बजारमा १५ लाख मात्र मालाको माग छ ।